नयाँ वर्ष २०१८ को लागि दोर्जे शुग्देनको सल्लाह | छेम रिन्पोछे
संसारभरिका आदरणीय साथीहरू,
तलको सल्लाह हालसालै रक्षक दोर्जे शुग्देनले चन्द्र नयाँ वर्ष २०१८ को अवधिमा दिनुभएको थियो | यो वर्ष तिब्बती नयाँ वर्ष (लोसार) र चिनियाँ नयाँ वर्ष एकै दिन, फेब्रुअरी १६ मा पर्‍यो | सोही दिन रक्षक दोर्जे शुग्देनले ध्यानमा प्रतिष्ठित सातौँ पांगलुंग कुटेनमार्फत कृपापूर्वक तल उल्लेखित सल्लाह दिनुभयो।
दोर्जे शुग्देनले सल्लाह दिनुभएको यो पहिलो पटक होइन। वर्षौदेखि मैले उहाँसँग धेरै पटक सल्लाह लिएको छु र हरेक पटक उहाँले धैर्यपूर्वक करुणाका साथ र सधैँ, सधैँ बोधी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हुन सुहाउने गरी अरूलाई लाभ हुने प्रेरणाका साथ उत्तर दिनुहुन्छ। तपाईंले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ कि उहाँले दिने सबै सल्लाह उत्तम धर्मबाहेक अरू हुँदैन। पक्कै पनि, यो हामीहरूको लागि अचम्म लाग्दो वा आश्चर्यजनक हुँदैन जसलाई दोर्जे शुग्देनको पृष्ठभूमि बारे थाहा छ। उहाँ अरू कोही नभएर स्वयम् मन्जुश्री हुनुहुन्छ जो दोर्जे शुग्देनको रूपमा जन्म लिनुअघि आफ्नो धेरै पूर्व जन्महरूमा प्रख्यात विद्वान, सफल अभ्यासकर्ता र तान्त्रिक गुरु हुनुहुन्थ्यो।
मैले तपाईंहरूको लागि यो सत्रको प्रत्यक्ष अडियो रेकर्डिङ समावेश गरेको छु। उहाँको सल्लाह यहाँ उपलब्ध गराइएको छ किनभने यो केवल दोर्जे शुग्देनलाई मान्नेहरूको लागि मात्र नभई उनीहरू सबैका लागि हो, जो आफ्नो आध्यात्मिक अभ्यासमा अघि बढ्न चाहन्छन्। कृपया यसलाई सुन्नुहोस् र केवल दिमागमा मात्र नराखी यसलाई अभ्यास गर्न लाग्नुहोस्। यो बुद्ध स्वयम् बाट आएको धर्म सुझाव हो। यदि हामीसँग दोर्जे शुग्देनजस्ता बोधी ज्ञान पाएका व्यक्तिको सल्लाह लिने गुण छ भने उक्त सल्लाहले हामी र हाम्रो आसपासमा बस्नेहरूलाई ठूलो लाभ दिनेछ।
चन्द्र नयाँ वर्ष २०१८ मा दोर्जे शुग्देनको सल्लाह
आज, चिनियाँ नयाँ वर्ष र तिब्बती नयाँ वर्ष एकै दिन परेको छ, म सबैलाई ताशी देले (सबै मंगल होस्) कामना गर्न चाहन्छु।
हामीले सानो सत्कर्मलाई पनि कम आँक्नु हुँदैन र हामीले ती काम गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। “सानो राम्रो कामले के हुन्छ?” र सानो राम्रो कामको फाइदा हुँदैन भन्ने नसोच्नुहोस्। असल कामहरू गर्नुको सुरुवात सानोभन्दा सानो कार्यहरू गर्ने प्रयासबाटै हुन्छ जबकि गलत कामहरू सानै कार्यहरूबाट पनि हटाउनै पर्छ।
“असल धर्म मनबाट उत्पन्न हुन्छ र मनलाई परिवर्तन गर्नु नै प्रारम्भिक अभ्यास हुनुपर्छ।” धर्म अभ्यास प्रेरणाको रूपमा आस्थामा आधारित हुन्छ जसले हामीलाई शुद्ध मन राख्न सहयोग गर्छ।
राम्रो प्रेरणाबाट सुरु गरेर, आफूले सकेसम्मको प्रयास गरेर, गलत सोचहरू नराखेर र असल कामहरू गर्न शुद्ध मन राख्नाले धेरै लाभ हुन्छ।
हामी धेरै जसो “सन्यास(त्याग), बोधिचित्त, शुन्यताको अनुभूति” बारे सजिलो छ भनी कुरा गर्छौं तर हामीले त्याग विकसित गर्न, अरूप्रति करुणामय मन बनाउन, आफ्नो जिद्दीपन बदल्न कडा परिश्रम गर्न र कोमल र दयालु बन्न मिहिनेत गर्नुपर्छ।
वास्तवमा धर्म अभ्यास गर्न, धेरै पाठ गर्नु, साष्टांग प्रणाम गर्नु, परिक्रमा गर्नु राम्रो हो तर असल धर्म अभ्यास भनेको आठ सांसारिक चिन्ता त्याग गरेर अभ्यास गर्नु हो। “आठ सांसारिक चिन्ता त्याग गर, सही अवसरहरूको स्थिति बर्बाद नगर” भन्ने भनाई छ। पहिलेका ऋषिहरूले गरेजस्तै ज्ञानको उत्कर्षमा पुग्न आठ सांसारिक चिन्ताहरू त्याग्ने।
“सांसारिक मानिसहरू”, सबै सामान्य मानिसहरू सांसारिक मानिसहरू हुन्, जसलाई सामान्यतः साधारण मानिसहरू भनिन्छ। यी सांसारिक मानिसहरूको लागि, आठ सांसारिक चिन्ताहरू त्याग गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ तर उनीहरूले सक्दो प्रयास भने गर्नुपर्छ चाहे त्यो एउटा राम्रो काम गरेर नै किन नहोस्। यो शुद्ध प्रेरणाबाट गरिनुपर्छ।
धर्म अभ्यास भनेको साधारण मानिसहरूले अभ्यास गर्न नसक्ने कुनै प्रशिक्षित संघको लागि होइन। यदि हामीले हामीलाई जे थाहा छ त्यो गर्यौँ र आफूले सक्दो गर्यौँ भने सुधार अवश्य हुनेछ।
“कुनै पनि घटनाहरूको प्राकृतिक रुपमा अस्तित्व हुँदैन”।”सबै घटनाहरू तोकिएका नामहरू मात्रै हुन्”| शुन्यता बुझ्न गाह्रो हुन्छ तर “जो सँग अझै दुविधा छ उनीहरूले अस्तित्वलाई धुजा धुजा पारि च्यात्नेछन्।” (शुन्यता अभ्यास गर्ना) ले धेरै गुणहरू आउँछन्।
यदि हामीले राम्रो काम गर्न चाहन्छौँ तर हामीले अरूलाई हानि गर्ने उद्देश्यले नराम्रो सोच राख्छौँ भने हामीले अभ्यास गरेको कुनै लाभ हुँदैन। यदि हामीले अरूलाई लाभ पुर्याउने परोपकारी प्रेरणाले अभ्यास गर्छौं भने त्यो अभ्यासले हामीलाई लाभ गर्नेछ।
“हामी आफ्नै आश्रय हौँ, हामी आफ्नै शत्रु हौँ”। हामी आफ्नै आश्रय हौँ, हामी तल्लो लोकमा झर्नबाट बच्नको लागि अरूको भर पर्न सक्दैनौँ; हाम्रा बाहिरी शत्रुहरू पनि कोहि छैनन् ।
हामीले मनलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ, दयालु प्रेरणा र नियत राख्नुपर्छ, यो हाम्रो लागि फाइदाजनक हुनेछ – यो जीवन र भावी जीवनहरू दुबैका लागि लाभकारी हुनेछ र यसले हाम्रो वर्तमान र भावी जीवनलाई बर्बाद बनाउँदैन।
अरूप्रति दुर्भावना राख्ने, अरूको हानि गर्ने र उनीहरूको जीवनमा कष्ट दिने कार्यले अन्ततः हामीलाई नकारात्मक असर पार्छ। “हामी आफ्नै शत्रु हौँ”, केवल हामी मात्र आफ्नो शत्रु हौँ, त्यो व्यक्ति जसले हामीलाई तल्लो लोकमा झार्न सक्छ त्यो हामी आफै हौँ।
“हामी आफ्नै आश्रय हौँ”, हामी आफ्नै आश्रय हौँ भन्नुको मतलब हामीले आफै गर्नुपर्छ, पानीको थोपा अन्तमा गएर महासागर बनेझैँ हामी सत्कर्म गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्छौं भन्ने हो।
राम्रो प्रेरणा लिनुहोस्; हामी बिरामी हुँदा वा हामीले बाधाको सामना गर्दा, अरूलाई दोष नदिनुहोस्। ती अरू हुन् जसले हामीलाई हानि गरिरहेका छन् वा अरूले आफूलाई यो गरे भनेर हामीलाई केही मद्दत हुने छैन ।
हामीले हाम्रो बुद्धि दिनानुदिन बढाउन र हरेक दिन दयालु बन्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसो गरेमा लाभ मिल्नेछ।
हामी बिरामी हुँदा, हामीले समयमै उपचार गर्नुपर्छ, हाम्रो शरीरको स्याहार गर्न जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो खानपान गलत छ र यसले हामीलाई बिरामी पार्छ भने त्यो हाम्रो गल्ति हो नकि अरूले हामीलाई गरेर भएको हो। पूजा गर्नु अस्थायी रूपमा बाधा हटाउने विधि मात्र हो। यदि हामीले जे मनपर्छ त्यही काम गर्छौं र समस्या पर्दा मात्र पूजा गर्छौं भने, हाम्रा समस्याहरूको समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ।
विगतमा जम्मा गरेको नकारात्मक कर्म र नराम्रो कार्यको लागि हामीले पाप स्वीकार (क्षमा) गर्नुपर्छ। हामीले १००-अक्षरी मन्त्र पाठ गर्न सक्छौँ, बुद्धको नाम जप्न सक्छौँ र ३५ कबुल बुद्धको जप गरी पापस्वीकारी क्षमा माग्न सक्छौँ।
चेनरेजिग(अवलोकितेश्वर) करुणाका यिदम हुन्। बोधी मन उत्पन्न गर्नको लागि, हामीले चेनरेजिगलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ र उहाँको मन्त्र जप्नुपर्छ।
सर्वोच्च मन्जुश्री विवेकका देवता हुन्, त्यसकारण हामीले आफ्नो विवेक वृद्धि गर्न मन्जुश्रीको प्रार्थना गर्नुपर्छ।
रहस्यका प्रभु, वज्रपानीलाई प्रार्थना गरे, उहाँको मन्त्र जप गरे अलौकिक बाधाहरू हटाउने शक्ति मिल्नेछ।
व्यापारमा सफलता देखि परिवारको सुरक्षा र खुशी सबैको लागि तारालाई प्रार्थना गर्नुहोस्, यो लाभदायक हुनेछ। जसरी प्रशंसामा भनिएको छ: “सन्तानको चाहना राखे सन्तति प्राप्त हुनेछ; धन चाहे धनपति हुनेछौ; जे चितायौ त्यही पुग्नेछ”। तपाईंलाई सफलता हासिल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा तपाईंको बुद्धिमा निर्भर हुन्छ।
छोटकरीमा त्याग, बोधीचित्त र शुन्यताको सही दृष्टिको आधारमा सबै सत्कर्महरू बोधी ज्ञान प्राप्त गर्न समर्पित गरेमा हामीले गरेका राम्रो कर्महरू कहिल्यै पनि समाप्त हुनेछैनन्।
जहाँसम्म आध्यात्मिक मार्गदर्शकमा भर पर्ने कुरा छ, बुद्धत्वको मार्गका चरण(लामरिम चेन्मो) मा उल्लेख गरिएजस्तै यहाँ भएका सबैमा यसको बारेमा केही जानकारी हुनुपर्छ र यो अभ्यास लामरिम चेन्मोमा उल्लेख भए अनुसार गर्नुपर्छ। “हरेक बुद्धत्वको आधार आफ्नो दयालु गुरुमा भर पर्नु हो”, आध्यात्मिक निर्देशनमा भर पर्ने देखि, त्यो मार्गका चरणहरू अभ्यास गर्ने र अन्ततः बुद्धत्व प्राप्त गर्नसम्म।
सबै राम्रा कर्महरू “म मानिसहरूको दुखबाट मुक्तिको कारण बन्न सकूँ” भन्ने प्रेरणाका साथ ज्ञान प्राप्त गर्न समर्पित गर्नुहोस्। यदि तपाईंमा यस्तो विचार छ भने, यो लाभदायक हुनेछ।
यसै गरी, सधैँ बुद्ध धर्मको प्रचारमा समर्पित हुनुहोस्, विशेषगरी मञ्जुनाथ चोंखापाको पवित्र ग्रन्थ फैलाउन र पछिसम्म यसको संरक्षणको गर्न। “यस्तै होस्” भनी सोच्नुहोस् र प्रेरणाको साथ बुद्धत्वको लागि आफ्नो राम्रा कार्यहरू समर्पित गर्नुहोस्।
तपाईंले यसो गर्नुहुन्छ भने, यसले समग्र रूपमा सबैलाई लाभ दिनेछ, यसले तपाईंको पनि लाभ हुनेछ।
फेब्रुअरी १६,२०१८ मा रेकर्ड गरिएको सल्लाह
 फबोंग्खा रिन्पोछे र त्रिजंग रिन्पोछे, लिबरेसन इन द पाम अफ योर ह्याण्ड, नयाँ संशोधित संस्करण (सोमेरविले, एम ए: विसडम, २००६), पाना ६२३
 आइबिड. पाना ६२९
 लिबरेसन इन द पाम अफ योर ह्याण्डमा व्याख्या गरिएको छ कि कोही शुन्यतामा विश्वास गर्न लागेको देखिन्छ र पनि शुन्यताको बारेमा दुविधा पाल्छ भने यसले आफूलाई र आफ्नो अस्तित्वबारे बुझाईलाई धुजा धुजा पार्नेछ। आइबिड. पाना ६२२-६२३
चन्द्र नयाँ वर्ष २०१८ को पहिलो दिन प्रतिष्ठित सातौं पांगलुंग ओरेकलमार्फत ट्रान्समा रक्षक दोर्जे शुग्देन (बायाँ) र पुजारी काचे मार्पो (बायाँ)।
नयाँ वर्ष २०१८ को लागि दोर्जे शुग्देनको सल्लाहको अडियो रेकर्डिङ
« ईश्वरीयता (ईश्वर) लाई पुकार्नु
संयुक्त राज्य अमेरिका 6,040,932